नारायणगढ-मुग्लिन सडक : नेपालकै नमुना बन्ने
Mon, Mar 19, 2018 सोमवार, चैत ५, २०७४
अनिल ढकाल मंगलवार, कात्तिक २८, २०७४ 27541 पटक पढिएको
नारायणगढ-मुग्लिन सडकमा कालोपत्रे गरिँदै । अन्नपूर्ण
कविलास (चितवन) : नारायणगढ-मुग्लिन सडकलाई नेपालकै नमुना बनाउन लागिएको छ । नेपालमा बनेका सडकमध्ये गुणस्तरीयतामा अहिलेसम्मकै नमुना बनाउन लागिएको छ । विश्व बैंकको अनुदानमा निर्माण भइरहेको यो सडक विभिन्न चरण गरी ६१ सेन्टिमिटर मोटाइको बन्नेछ । तीन चरणको ग्राभेल र दुई चरणको कालोपत्रे गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सडक निर्माण भइरहेको छ । सुरुवातमा बाटोको आकार निकालेपछि त्यसमा २० सेन्टिमिटर ग्राभेल राखेर सव बेस बनाइएको छ।
त्यसमा २५ सेन्टिमिटर ग्राभेल राखेर २५ सेन्टिमिटर बेस बनाएपछि मात्रै कालोपत्रे गरिन्छ । त्यसपछि मात्रै १६ सेन्टिमिटर कालोपत्रे गरिन्छ । ठूला सवारी भारलाई लक्षित गरेर सडकको डिजाइन गरिएको कन्सलट्यान्ट इन्जिनियर पुस्कर रेग्मीले बताए । ‘नेपालको सवारीको चाप र भार हेरेर बाटो बनाइएको छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नयाँ खालको प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालकै नमुनाको सडक बन्न लागेको छ ।’
सडकमा तीन तहको कालोपत्रे गरिनेछ । जुन १६ सेन्टिमिटर मोटो हुनेछ । पहिलो तह र दोस्रो तहमा ६÷६ तहको कालोपत्रे गरिनेछ । अन्तिममा ४ सेन्टिमिटर मोटाइ भएको ‘अस्फाल्ट कंक्रिट’ को सात मिटर चौंडाईको क्यारिज वे बनाइन्छ । गुणस्तरीयतासँगै लामो समय टिकाउ हुने सडक बनाइएको छ । यात्राको सहजताका लागि सूचना दिने गरी दुई स्थानमा डिजिटल रोड इन्फरमेसन बोर्ड राखिएको छ । यसले यात्राबारे सूचना गराउँछ । यस्तो वोर्ड देशभर सात स्थानमा राखिएको छ ।
सडक निर्माणका लागि उच्च गुणस्तरको अलकत्र प्रयोग गरिएको छ । इरान र भारतबाट उत्पादित अलकत्र नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग गरिएको छ । ‘सडक निर्माणको गुणस्तरमा नेपालमा यस्तो सडक बनेको छैन’, आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएपछि ३५ मिनेटमा पार गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात आयोजना अन्तर्गतको परियोजनाबाट सडक निर्माण गरिएको हो । यसअघि औसतमा ७० मिनेटमा यो सडक पार गर्न लागे पनि अब झण्डै आधा समय कम लाग्नेछ ।
आँपटारीबाट १६ किलोमिटरसम्म ११ मिटर र त्यहाँबाट मुग्लिनसम्म नौ मिटरको चौंडाईको बनाइएको छ । मंगलबारदेखि ती स्थानको पहाड फोर्ने काम गरिनेछ । आयोजनाका अनुसार १६ किलोमिटर घुमाउने र मुग्लिन नजिक चेपाङ डाँडामा भित्ता फोर्ने काम गरिनेछ । ‘यो आर्थिक वर्ष जसरी पनि काम सक्नुछ’, लामा उडहिल जेभीका कन्ट्र्याक्ट म्यानेजर रबीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘बाटो बन्द नगरी काम गर्दा भनेजति गर्न सकेका छैनौं ।’
हालसम्म सडक निर्माणको ५९ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । तोकिएको समयमा काम पूरा गर्न अहिले ६५ प्रतिशत काम सकिनुपर्ने थियो । भूकम्प, नाकाबन्दी र वर्षामा पहिरोका कारण सडक निर्माणको काम सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । चाडपर्व र निर्वाचनका कारण देखाउँदै काम गर्न सडक बन्द नगर्दा काम छिटो हुन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । काम छिटो गराउन निर्माण कम्पनीलाई मेसिन र मजदुर थप्न निर्देशन दिईएको छ । कतिपय स्थानमा कालोपत्रे गर्न थालिएको छ ।
विभिन्न खण्ड गरी अहिलेसम्म साढे १० किलोमिटर कालोपत्रेको काम सकिएको छ । सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ नहुने गरी यातायात व्यवस्थापन मिलाइएको ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सन्तोष पन्तले बताए । उनका अनुसार निर्वाचनसम्म अवस्था हेरेर सवारी साधन रोकी निर्माणको काम गरिनेछ । अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सवारी चाप हेरेर एक पटकमा एकदेखि डेढ घण्टासम्म सवारी साधनलाई रोकेर छाडिनेछ ।
३६ किमि सडकमध्ये ३३ दशमलव दुई किमिमा स्तर उन्नतिको सुरु गरिएको हो । सडक निर्माणका लागि तीनपटक म्याद थपिएको छ । सडकको स्तर उन्नतिको काम सन् २०१५ अप्रिलबाट सुरु भएको हो । पछिल्लो पटक थपिएको समयअनुसार सन् १०१८ को फ्रेब्रुअरीमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । राजधानी मात्र नभई पूर्वपश्चिम जान प्रयोग हुने यो सडकलाई मुलुकको लाइफलाइनका रूपमा लिने गरिएको छ । यो सडकमा दैनिक आठ हजार सवारी साधन गुड्छन् ।
सोमवार, चैत ५, २०७४ बीस वर्ष पुराना सवारी साधन जफत
सोमवार, चैत ५, २०७४ ट्यांकर व्यवसायी र मजदुर विवादले पूर्वमा तेल अभाव
सोमवार, चैत ५, २०७४ अलपत्र चिया पढाइ
सोमवार, चैत ५, २०७४ कसिलो हुँदै वित्तीय अवस्था
सोमवार, चैत ५, २०७४ अलैंचीखेतीमा रम्दै युवा
सोमवार, चैत ५, २०७४ बेलबारीमा १० बिघाको रिसोर्ट
सोमवार, चैत ५, २०७४ यूटीएल र स्मार्ट टेलिकम कारबाहीमा
सोमवार, चैत ५, २०७४ बढ्यो खर्च, उठेन राजस्व : सरकारको खर्च खाता ऋणात्मक
५० वर्षसम्म बनेन चिसापानी-मंगलसेन द्रुतमार्ग 1434
'गलत गर्ने अभिलाषा भए दण्ड भोग्न तयार हुनु' 870
मापदण्ड बिनै सडक खन्दा फेवाताल संकटमा 403
अस्पताल भवन अधुरै, जग्गादाता खिन्न 403
तक्मा वितरण सोर्सफोर्समै, बर्सेनि ६ करोड खर्च 438
स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य संस्था हस्तान्तरण 230
कांग्रेस पराजय अपेक्षित थिएन र ? 698
विकासका लागि स्थायी सरकार 234
प्रदेश बलियो बनाउने हो भने 313
मोटरसाइकल चोरी गर्ने समूह पक्राउ 14
खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गरिने : मन्त्री पण्डित 111
तीन अर्ब ६० करोडको संरचना २४ महिनामै ठडियो 7716
'खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी बर्खास्त' 1154
नक्कली प्रहरीको भेषमा ठगी गर्ने महिला पक्राउ 330
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्: अब चिल्ला सडक बनुन्, खेतमा धानका बाला झुलुन् 1497
नास्टका फुर्सदिला वैज्ञानिक 476
सामसुङ एस ९ र एस ९ प्लस 2284
दुई वर्षीय बालकले ४७ वर्षका लागि लक गरिदिए आईफोन 10583
भोडाफोन र नोकियाको महत्वाकांक्षी ‘मुन मिसन’ योजना 2091
एक शिक्षक: जसले कालोपाटीमा आकृति कोरेर कम्प्युटर सिकाउँछन् 4691
पुरानो सिम नफाल्नुहोस्, फसिएला ! 13286